Vietnam dia manokatra indray ny nosy Phu Quoc ho an'ireo mpizahatany vahiny vita vaksiny tanteraka
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Vietnam » Vietnam dia manokatra indray ny nosy Phu Quoc ho an'ireo mpizahatany vahiny vita vaksiny tanteraka
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • fiantsenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao Mafana Vietnam
Vietnam dia manokatra indray ny nosy Phu Quoc ho an'ireo mpizahatany vahiny vita vaksiny tanteraka.
Ny mpiasa rehetra miasa ao amin'ny tobin'ny serivisy ao amin'ny nosy ary ny 99% amin'ny olon-dehibe ao Phu Quoc dia efa vita vaksiny tanteraka amin'ny viriosy COVID-19.
Nosy fialan-tsasatra any Vietnam Phu Quoc nandray vahiny maherin'ny 200 vita vaksiny avy any Korea Atsimo androany.
Ny mpitsidika Koreana Tatsimo no mpizahatany vahiny voalohany nankany Vietnam hatramin'ny nanidy ny sisin-taniny efa ho roa taona lasa izay mba hampitsaharana ny fihanaky ny otrikaretina coronavirus.
i Vietnam nanidy ny sisin-taniny tamin'ny martsa 2020, fotoana fohy taorian'ny nanamarinany ny tranga voalohany voan'ny otrikaretina COVID-19.
Nanomboka tamin'izay, i Vietnam sidina iraisam-pirenena maromaro isan-kerinandro ihany no navela niaraka tamin'ireo manampahaizana vahiny, diplaomaty ary teratany Vietnamiana niverina.
Ireo fahatongavana iraisam-pirenena ireo dia tsy maintsy mandalo confinement 14 andro any amin'ny hotely voatondro na tranom-panjakana.
Androany, nosedraina ho an'ny COVID-19 ireo mpizahatany Koreana Tatsimo vita vaksiny tanteraka rehefa tonga, ary rehefa tafaverina ny vokatra ratsy dia afaka mankafy ny hetsika fizahan-tany rehetra ao amin'ny nosy izy ireo raha tsy misy famerana 14 andro.
Ireo mpitsidika Koreana Tatsimo dia afaka mankafy an-kalalahana amin'ny hetsika fitsangantsanganana, fiantsenana ary fialamboly izay mitaky mari-pankasitrahana vaksiny.
Araka ny filazan'ny Minisiteran'ny Fahasalamana any Vietnam, ny mpiasa rehetra miasa ao amin'ny tobim-panompoana ao amin'ny nosy ary ny 99%. Phu QuocNy olon-dehibe mponina dia efa vita vaksiny tanteraka amin'ny otrikaretina COVID-19.
Mikasa ny hanao vaksiny zaza 12 ka hatramin’ny 17 taona ihany koa ny Nosy amin’ny volana ho avy.
i Vietnam no firenena farany any Azia niaraka tamin'i Thailand, Indonezia ary Malezia tamin'ny fanokafana indray ny sisin-taniny ho an'ireo vahiny efa vita vaksiny tanteraka.
Thailandy no voalohany nanomboka nanome alalana ny mpitsidika vahiny vita vaksiny tanteraka ao amin'ny nosy Phuket alohan'ny hanitarana any amin'ny faritra hafa, anisan'izany i Bangkok, nanomboka ny 1 Novambra.
Ny nosy mpizahatany Indoneziana Bali dia nisokatra ho an'ny fahatongavana tamin'ny volana lasa niaraka tamin'ny fameperana sasany ao anatin'izany ny fitsapana sy ny trano fandraisam-bahiny dimy andro.
Nanokatra ny nosy Langkawi i Malezia tamin'ny alàlan'ny programa mpanamory fiaramanidina 'COVID-19 bubble'.